ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအကြားမကြာခဏညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများသုံးစွဲမှု၊ အပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမသက်ဆိုင်မှုများအကြားဆက်နွယ်မှု (၂၀၁၇) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
၁၈ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများတွင်အပျိုစင်အသုံးပြုမှုသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်လေ့လာမှုအရအသုံးပြုသူများကိုအုပ်စုသုံးစု ခွဲ၍ - မကြာခဏ (နေ့စဉ်)၊ ပျမ်းမျှ (အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို) နှင့်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော -
အားလုံးနီးပါးဖြေဆိုသူ (98%) ကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာအထိပေမယ့်, ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ က Eleven ရာခိုင်နှုန်းကမကြာခဏသုံးစွဲသူများ 69 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပျမ်းမျှအားသုံးစွဲသူများနှင့် 20 ရာခိုင်နှုန်းကိုခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုသူများကိုဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများအခက်ခဲ-Core porn ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဒီညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတင်းမာမှုညွှန်ပြပါသလား?
မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်အနက်ကိုလောင်ညစ်ညမ်း၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားပျော့ core ကိုညစ်ညမ်းပျှမ်းမျှ (71%) နှင့်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုသူများအတွက်အများဆုံးရွေးချယ်ထားသည့်အမျိုးအစား (64% စဉ် core ကိုညစ်ညမ်း (73%), လိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်း (36%) ကနောက်တော်သို့လိုက်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ် ) ။ အမာခံညစ်ညမ်း (71%, 48%, 10%) နှင့်အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်း (14%, 9%, 0%) စောင့်ကြည့်သူအချိုးအစားအတွက်အုပ်စုများအကြားတစ်ဦးကွာခြားချက်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူသောအမှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်စေ့စပ်ရှိသည်ဟုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့ကြသည်:
မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ထိုကဲ့သို့သောပါးစပ်လိင် (76%, 61%, 49%) ပေးခြင်းနှင့်ခံတွင်းလိင် (76%, 66%, 53%) ကိုလက်ခံရရှိအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ, တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အကွာအဝေးပါဝင်ခဲ့ကြပါပြီပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။
ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောသာ 50% ရှိခဲ့စဉ်မကြာခဏအသုံးပြုသူ 10% မကြာခဏအသုံးပြုသူများကသူတို့ porn မြင်သောအရာကိုကူးယူကြိုက်တယ်သောတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ aligns ရာ, စအိုလိင်ဆက်ဆံရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့:
စားပွဲတင်4တစ်ဦးပါဝင်သူစအိုလိင်ဆက်ဆံသို့မဟုတ်မ (29%, 20%, 10%) ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ဖူးဖြစ်စေမများအတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုလည်းရှိကွောငျးကိုပြသသည်။ မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းညစ်ညမ်းရုပ်ရှင် (50%, 39%, 17%) တွင်တွေ့မြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူကြိုးစားခဲ့ကြဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာမကြာခဏ porn အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပုံဖော်ပုံ:
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်မကြာခဏအသုံးပြုသူများကိုပိုပြီးမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်မှာအစောပိုင်းအသက်အရွယ်အပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေကိုသတင်းပို့, စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်ညစ်ညမ်းတွင်တွေ့မြင်လုပ်ရပ်များကြိုးစားခဲ့ဘဲလျက်ကြောင်းပြသပါ။ ဒါကြောင့်အက်စ်တီအိုင်မှထိတွေ့မှုများနှင့်သက်သေအထောက်အထားများကြာချိန်ငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်မှာလိင်ရှိသည်သောသူတစ်ဦးချင်းစီဟာတစ်သက်တာကျော် riskier အပြုအမူရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက် "အရေးကြီးပါသည်။ လုံလောက်သောကာကွယ်မှုအသုံးပြုသွားမည်လျှင်စအိုလိင်ဆက်ဆံသေချာပေါက်တစ်ဦးအန္တရာယ်များအပြုအမူမဟုတ်ပါဘူးသော်လည်း, ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ကြားတွင်တွေ့ရှိခဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံ၏မြင့်မားသောဥပမာအားဖြင့်ညစ်ညမ်းအတွက်တင်ပြအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုများပျံ့နှံ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကိုရည်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 3AM အပေါ်အခြေခံပြီး, မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းတွင်တွေ့မြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူထွက်စမ်းသပ်ဖို့ကပိုများပါတယ်လျှင်, သူတို့ပြုမူသောအမှုဖျော်ဖြေမြင်ကြပြီဖြစ်သောအတွက်အန္တရာယ်များထုံးစံလည်း (ဝယ်ယူ) internalized နှင့် real- အတွက် (လျှောက်လွှာ) လျှောက်ထားစေခြင်းငှါယူဆပါတယ်ဖို့အလှမ်းဝေးမဟုတ်ပါဘူး ဘဝအခြေအနေတွေ။
ငါတို့သည်လည်း, မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ရွယ်တူချင်းနှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အကျိုးစီးပွားရှိခြင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့စဉ်းစားရန်ပိုမိုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ညစ်ညမ်းတွင်တွေ့မြင်ကြိုးစားနေလုပ်ရပ်များ fantasize အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်, sex အကြောင်းအားလုံးနီးပါးအချိန်ကိုထင်နှင့်ထို့ထက် ပို. သူတို့ထက်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့် စေချင်တယ်။ ဤရလဒ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျးနှင့် compulsive ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွဲဆောင်မှုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပူဇော်လော့။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်မကြာခဏအသုံးပြုသူများကရွယ်တူချင်းနှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစဉ်းစားပါဆိုတဲ့အချက်ကိုသူ့ဟာသူအတွက်ပြဿနာတစ်ခုညွှန်ပြမထားဘူး။ သို့သျောလညျး လိင်အားလုံးနီးပါးအချိန်ကိုစဉ်းစားကြောင်းညစ်ညမ်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်နှင့် 44 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင်တွေ့မြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကြိုးစားနေအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ရှိခြင်းမကြာခဏအသုံးပြုသူများအများ၏ 53 ရာခိုင်နှုန်းအစားဤတွေ့ရှိချက်အတူတကွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျးများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းသက်သေအထောက်အထားသည်။ သူတို့ကပထမနေရာတွင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကညစ်ညမ်းစားသုံးကြသည်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့လိင်အကြောင်းပိုမိုစဉ်းစားတက်အဆုံးသတ်ကြောင်းညစ်ညမ်း watch ကြောင့်ထိုသို့: ဒါဟာကြောင်းကျိုးဆက်စပ်၏ညှနျကွားဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲပါသလဲ ဤအလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းပထမဦးဆုံးဌာန၌လိင်အတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြပေမယ့်ညစ်ညမ်းလိင်အတွက် ပို. ပင်, အလားအလာပြဿနာသိမြင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း: ပေတရုနှင့် Valkenburg ရဲ့တွေ့ရှိချက်ဟာသိသိဆက်ဆံရေးမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။
စာရေးသူမကြာခဏ porn အသုံးပြုမှုကိုခက်ခဲ-Core သို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းများအတွက် preference ကိုမှဦးဆောင်ကြောင်းအကြံပြု;
ဒါဟာကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဆက်ဆံရေးဟာညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုကူးယဉျအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်နဲ့ Hard core ကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အကြားတွေ့သောလည်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ညစ်ညမ်းအတွက်ဒါအမြားအတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းကအများဆုံးမြီးကောင်ပေါက်ခက်ခဲစဉ်းစားဘာ core ကိုညစ်ညမ်းဖွယ်ရှိအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအမှုဖြစ်လျှင်, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျး၏အကြံပြုသိသိသဘာဝတရား၏အလငျး၌ပေတရုနှင့် Valkenburg အတွက်, ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲဖြင့် manifest လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်, ခက် core ကိုညစ်ညမ်းသူတို့ကိုမှုတွေကိုဖြစ်စေစောင့်ကြည့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သူတို့၏စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်စိတျ၏တစ်ဦးချင်းစီ '' purging '' ထက်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါစာရေးဆရာကသူတို့တွေ့ရှိချက်စွဲမော်ဒယ်နှင့်အတူ align ကြောင်းပြော:
compulsive ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူ, ကမကြာခဏအသုံးပြုသူများ၏သုံးပုံတစ်ပုံသူတို့ချင်တယ်ထက်ညစ်ညမ်းပိုပြီးစောင့်ကြည့်ဝန်ခံကြောင်းသပိတ်မှောက်လျက်ရှိသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလက်တွေ့သုတေသနတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ညစ်ညမ်းအလားအလာစွဲလမ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ မြီးကောင်ပေါက် '' ဦးနှောက်ဟာသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအဆင့်နေဆဲကတည်းကလူငယ်များပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ , ဤ "လူကြီးများနှင့်မတူဘဲမြီးကောင်ပေါက်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတရားသော, အတှေးအများနှင့်ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာအားဖြင့်ရူးနှမ်းအပြုအမူတွေကိုဖိနှိပ်ရန်လိုအပ်သည်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကွိုးစားအားထုရန်လိုအပ်သောတိုကျရိုကျ cortical အတွက်လုံလောက်သောရငျ့နှင့်သမာဓိရှိကင်းမဲ့ယုံကြည်ကြသည်" ဟုအဆိုပါအယူအဆကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်စဉ်ကိုအတူပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ဝေးပုံရိပ်တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် ကျမ်းစာ၌ရေးထားသို့မဟုတ်ပြောပြီစကားလုံးများကိုထက် သာ. ကောင်း၏, သက်ဆိုင်ရာ, ထိရောက်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအားလုံးပိုမိုအရေးပါသည့်ညစ်ညမ်း '' script ကို '' အတွက်မက်ဆေ့ခ်ျညှိဖြစ်လာဆိုလိုသည်။
ရလဒ်များညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်အသက်ငယ်အသက်အရွယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ရှိသည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံတဲ့ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းညွှန်ပြခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျးနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူရုန်းကန်ဖို့ပိုများပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကညစ်ညမ်းမြီးကောင်ပေါက်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိစေခြင်းငှါသက်သေအထောက်အထားပေးသုတေသနတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်စေတယ်။
Donevan, အမ်, & Mattebo, အမ် (2017) ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အလယ်အလတ်နှင့်အကြီးစားဆွီဒင်နိုင်ငံရှိအသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်၊ တတိယနှစ်အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားအချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ နှစ်မြို့လုံးရှိတတိယနှစ်ကျောင်းသားစုစုပေါင်းလူ ဦး ရေမှာ ၉၄၆ ဦး (မိန်းကလေး ၅၁၀ နှင့်ယောက်ျားလေး ၄၃၆) ဖြစ်သည်။
မကြာခဏအသုံးပြုသူများပိုမိုမြင့်မားအတိုင်းအတာရန်ခက်ခဲ core ကိုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်း watched ။
မကြာခဏအသုံးပြုသူများအခက်ခဲ core ကိုညစ်ညမ်းတွင်တွေ့မြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကြိုးစားနေအကြောင်းကို fantasized ။
အားလုံးနီးပါးဖြေဆိုသူ (98% ဎ = 361) ကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာအထိပေမယ့်, ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ က Eleven ရာခိုင်နှုန်းကမကြာခဏအသုံးပြုသူများသည် (ဎ = 42), 69 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပျမ်းမျှအားအသုံးပြုသူများသည် (ဎ = 256), နှင့် 20 ရာခိုင်နှုန်းကိုခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုသူများကို (ဎ = 72) ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သည့်အခါအများစုက (89% ဎ = 332) စောင့်ကြည့်ဖို့ပဏာမခြေလှမ်းကို ယူ. (90% ဎ = 336) တစ်ဦးတည်းကစောင့်ကြည့်။ မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်များထဲတွင်ညစ်ညမ်း၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားအမာခံညစ်ညမ်း (71% ဎ = 30) ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုလောင်ပျော့ core ကိုညစ်ညမ်းပျှမ်းမျှ (64 များအတွက်အများဆုံးရွေးချယ်ထားသည့်အမျိုးအစားခဲ့စဉ်လိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်း (27% ဎ = 73) ကနောက်တော်သို့လိုက် % ဎ = 186) နှင့်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုသူများကို (36% ဎ = 26) ။ 71% ဎ = 30;; ရှိပါတယ်အမာခံညစ်ညမ်း (48% ဎ = 122 စောင့်ကြည့်သူအချိုးအစားအတွက်အုပ်စုများအကြားတစ်ဦးခြားနားချက်ကိုလည်းခဲ့ 10% ဎ = 7; p <0.001) နှင့်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ (14%, n = 6; 9%, n = 26; 0%, n = 0; p = 0.011)
ဖြေဆိုသူများကသတင်းပေးပို့အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုစားပွဲတင်3မှာပြနေကြသည်။ 76% ဎ = 31;; မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ထိုကဲ့သို့သော (61% ပါးစပ်လိင်ပေးခြင်း, ဎ = 156 အဖြစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပိုမိုကျယ်ပြန်အကွာအဝေးပါဝင်ခဲ့ကြပါပြီပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့ကြသည် 49% ဎ = 34; p = 0.017) နှင့်ခံတွင်းလိင် (76% ဎ = 32 လက်ခံရရှိ; 66% ဎ = 165; 53% ဎ = 37; p = 0.032) ။ စားပွဲတင်429% (တစ်ဦးပါဝင်သူစအိုလိင်ဆက်ဆံပါဝင်ခဲ့သို့မဟုတ်မဖူးဖြစ်စေမများအတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုလည်းရှိကွောငျးကိုပြဎ = 12; 20% ဎ = 50; 10% ဎ = 7; p = 0.039) ။ မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွင်တွေ့မြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (50% ကြိုးစားခဲ့ကြဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်, ဎ = 20; 39% ဎ = 100; 17% ဎ = 17; p <0.001) ။ ဤရွေ့ကားလုပ်ရပ်များပါဝင်သည်: ပါးစပ်လိင် (33%, n = 14; 21%, n = 53; 3%, n = 2; p <0.001), အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း (45%, n = 19; 30%, n = 77; 8%, n = 6; p <0.001) နှင့်စအိုလိင် (17%, n = 7; 10%, n = 26; 0%, n = 0; p = 0.005) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ရလဒ်ဇယား4အတွက်တင်ပြနေကြပါတယ်။ (လက်ခံရရှိပထမဦးဆုံးပါးစပ်လိင်၏အသက်အရွယ်ကိုဆိုလိုတာF(2, 228) = 3.99), p = 0.020) နှင့်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်လိင်မှာအသက်အရွယ်ကိုဆိုလိုတာ (F(2, 250) = 7.59, p = 0.001), မကြာခဏပျှမ်းမျှနှင့်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုသူများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားပါတယ်။ အဆိုပါ Tukey HSD စမ်းသပ်သုံးပြီး post hoc နှိုင်းယှဉ် (ပထမပါးစပ်လိင်၏ယုတ်အသက်အရွယ်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းညွှန်ပြM = -0.38, SD = 0.31) နှင့်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုမှာယုတ်အသက်အရွယ် (M = -0.36, SD = မကြာခဏအသုံးပြုသူများအတွက် 0.29) ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုသူများထံမှသိသိသာသာပျမ်းမျှအားအသုံးပြုသူများထံမှကွဲပြားခြားနားပေမယ့်ကြဘူး။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျးနှင့် compulsive ၏ညွှန်းကိန်းများ
အများအပြားကတုံ့ပြန်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျးနှင့် compulsive ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။ 5% ဎ = 19;; 8% ဎ = 8 မကြာခဏအသုံးပြုသူများကိုလိင် (17% ဎ = 1 နှစ်ဦးစလုံးအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစဉ်းစားစားပွဲတင် 1, ရည်ညွှန်းပြီး; p = 0.002) နှင့်ညစ်ညမ်း (19% ဎ = 8; 4% ဎ = 10; 0% ဎ = 0; p <0.001) ရွယ်တူနှိုင်းယှဉ်။ မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်လိင်အကြောင်းအမြဲတမ်းစဉ်းစားရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည် (53%, n = 21; 50%, n = 123; 25%, n = 18; p = 0.001), နှင့်ပိုပြီးညစ်ညမ်းတွင်တွေ့မြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကြိုးစားနေအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ရှိသည်ဖို့ဖွယ်ရှိအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ် (44% ဎ = 18; 9% ဎ = 23; 6% ဎ = 3; p <0.001) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသည့်မကြာခဏအသုံးပြုသူအချိုးအစားသည်ရွယ်တူချင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိုချင်သောဆန္ဒထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုကိုပိုမိုဖော်ပြခဲ့သည် (ဇယား ၆) ။ အားလုံး၏ဖြေကြားသူ (n = 6၊ ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူ) ကအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အလိုရှိသည်ထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအားဖော်ပြခြင်းတို့မှအတွေ့အကြုံများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ မကြာခဏနှင့်ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူများအကြားအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်အကြောင်းကိုအမြဲစဉ်းစားခြင်းအတွေ့အကြုံရှိသည် (1%, n = 60; 3%, n = 42; p = 10) သို့သော်ပိုမိုမြင့်မားသောအချိုးအစားအသုံးပြုသူကအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ပတ်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်တွေ့ရသောလိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအားကြိုးစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖော်ပြခြင်းမှတွေ့ကြုံမှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည် (n = 0.520, 3%; 50%, n = 25, p = 6) ။ အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမှအတွေ့အကြုံအားတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်မကြာခဏအသုံးပြုသူများကိုပိုပြီးမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်မှာအစောပိုင်းအသက်အရွယ်အပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေကိုသတင်းပို့, စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်ညစ်ညမ်းတွင်တွေ့မြင်လုပ်ရပ်များကြိုးစားခဲ့ဘဲလျက်ကြောင်းပြသပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်က "အက်စ်တီအိုင်မှထိတွေ့မှုများ၏ကြာချိန်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်အရေးကြီးသော" ဖြစ်ပါတယ်9(p1207) နှင့်သက်သေအထောက်အထားစအိုလိင်ဆက်ဆံသေချာပေါက်လျှင်အန္တရာယ်များအပြုအမူမဟုတ်ပေမယ့်အငယ်အသက်အရွယ်မှာလိင်ရှိသည်သောသူတစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦး lifetime.9 ကျော် riskier အပြုအမူရှိစေခြင်းငှါအကြံပြု လုံလောက်သောကာကွယ်မှုညစ်ညမ်းအတွက်တင်ပြအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုများပျံ့နှံ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ကြားတွင်တွေ့ရှိခဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံ၏မြင့်မားသောဥပမာအားဖြင့်ရည်မှတ်သည်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းတွင်တွေ့မြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူထွက်စမ်းသပ်ဖို့ကပိုများပါတယ်လျှင် 3AM အပေါ်အခြေခံပြီး, ကသူတို့ပြုမူသောအမှုဖျော်ဖြေမြင်ကြပြီဖြစ်သောအတွက်အန္တရာယ်များထုံးစံလည်း ((ဝယ်ယူ) internalized နှင့်လျှောက်ထားစေခြင်းငှါယူဆပါတယ်ဖို့အလှမ်းဝေးမဟုတ်ပါဘူး စစ်မှန်သောဘဝအခြေအနေတွေအတွက်လျှောက်လွှာ) ။
ငါတို့သည်လည်း, မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ရွယ်တူချင်းနှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အကျိုးစီးပွားရှိခြင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့စဉ်းစားရန်ပိုမိုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ညစ်ညမ်းတွင်တွေ့မြင်ကြိုးစားနေလုပ်ရပ်များ fantasize အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်, sex အကြောင်းအားလုံးနီးပါးအချိန်ကိုထင်နှင့်ထို့ထက် ပို. သူတို့ထက်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့် စေချင်တယ်။ ဤရလဒ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျးနှင့် compulsive ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွဲဆောင်မှုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပူဇော်လော့။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်မကြာခဏအသုံးပြုသူများကရွယ်တူချင်းနှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစဉ်းစားပါဆိုတဲ့အချက်ကိုသူ့ဟာသူအတွက်ပြဿနာတစ်ခုညွှန်ပြမထားဘူး။ သို့သော်လိင်အားလုံးနီးပါးအချိန်ကိုစဉ်းစားကြောင်းညစ်ညမ်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်နှင့် 44 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင်တွေ့မြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကြိုးစားနေအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ရှိခြင်းမကြာခဏအသုံးပြုသူများအများ၏ 53 ရာခိုင်နှုန်းအစားဤတွေ့ရှိချက်အတူတကွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျးများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းသက်သေအထောက်အထားပေး။ သူတို့ကပထမနေရာတွင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကညစ်ညမ်းစားသုံးကြသည်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့လိင်အကြောင်းပိုမိုစဉ်းစားတက်အဆုံးသတ်ကြောင်းညစ်ညမ်း watch ကြောင့်ထိုသို့: ဒါဟာကြောင်းကျိုးဆက်စပ်၏ညှနျကွားဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲပါသလဲ ဤအလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းပထမဦးဆုံးဌာန၌လိင်အတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြပေမယ့်ညစ်ညမ်းလိင်အတွက် ပို. ပင်, အလားအလာပြဿနာသိမြင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း: ပေတရုနှင့် Valkenburg's15 တွေ့ရှိချက်တစ်ခုသိသိဆက်ဆံရေးမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒါဟာကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဆက်ဆံရေးဟာညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုကူးယဉျအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်နဲ့ Hard core ကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အကြားတွေ့သောလည်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ညစ်ညမ်းအတွက်ဒါအမြားအတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းကအများဆုံးမြီးကောင်ပေါက်ခက်ခဲစဉ်းစားဘာ core ကိုညစ်ညမ်းဖွယ်ရှိအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။24 ဒီအမှုဖြစ်ပြီး, ပေတရုနှင့် Valkenburg အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျး၏အကြံပြုသိသိသဘောသဘာဝ, 15 ၏အလငျး၌ကအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲအမာခံညစ်ညမ်းသူတို့ကိုမှုတွေကိုဖြစ်စေစောင့်ကြည့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သူတို့၏စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်စိတျ၏တစ်ဦးချင်းစီ '' purging '' ထက်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်ဆိုပါက manifest လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်။
compulsive ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူ, ကမကြာခဏအသုံးပြုသူများ၏သုံးပုံတစ်ပုံသူတို့ချင်တယ်ထက်ညစ်ညမ်းပိုပြီးစောင့်ကြည့်ဝန်ခံကြောင်းသပိတ်မှောက်လျက်ရှိသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလက်တွေ့သုတေသနတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ညစ်ညမ်းအလားအလာစွဲလမ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ မြီးကောင်ပေါက် '' ဦးနှောက်ဟာသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအဆင့်နေဆဲကတည်းကလူငယ်များပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤ2(p114) "လူကြီးများနှင့်မတူဘဲမြီးကောင်ပေါက်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတရားသော, အတှေးအများနှင့်ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာအားဖြင့်ရူးနှမ်းအပြုအမူတွေကိုဖိနှိပ်ရန်လိုအပ်သည်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကွိုးစားအားထုရန်လိုအပ်သောတိုကျရိုကျ cortical အတွက်လုံလောက်သောရငျ့နှင့်သမာဓိရှိကင်းမဲ့ယုံကြည်ကြသည်" ဟုအဆိုပါအယူအဆကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်စဉ်ကိုနဲ့ပေါင်းစပ် နှင့်စာဖြင့်ရေးသားသို့မဟုတ်ပြောပြီစကားလုံးများကိုထက်ဝေးပိုကောင်းပုံရိပ်တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်,2သက်ဆိုင်ရာ, ထိရောက်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအားလုံးပိုမိုအရေးပါသည့်ညစ်ညမ်း '' script ကို '' အတွက်မက်ဆေ့ခ်ျညှိဖြစ်လာဆိုလိုသည်။
စာသင်ခန်းများကိုကျပန်းရွေးချယ်ထားခြင်းကြောင့်ရလဒ်နှစ်ခုကိုမြို့နှစ်မြို့၏ကိုယ်စားပြုသင့်သည်။ ရလဒ်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဆွီဒင်သို့မဟုတ်အခြား ၁၂ နိုင်ငံအတွက်ကိုယ်စားပြုမှုမဟုတ်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောလူ ဦး ရေဆိုင်ရာနယ်ပယ်များ၌အနာဂတ်သုတေသနကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အချက်အလက်များ၏အပြန်အလှန်သဘာ ၀ သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်ဤလေ့လာမှုမှရရှိသောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကောက်ချက်များအပေါ်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြသနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိ၊ အစောပိုင်းလိင်ပွဲ ဦး ထွက်သည်လူမှုရေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားရှုပ်ထွေးသော variable များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိမသေချာပေ။ ဤရှုပ်ထွေးနေသော variable များကိုကိုင်တွယ်သော quasiexperimental ဒီဇိုင်းများမှစာပေ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အကျိုးရှိလိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်လူတစ် ဦး ချင်းအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းစစ်ဆေးခြင်းကိုအထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤလေ့လာမှုသည် longitudinal အစီအမံများမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်။ သို့တိုင်, ဒီလေ့လာမှု၏အစွမ်းသတ္တိကိုအခြားရွေးချယ်စရာနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြု။ အလားတူလေ့လာမှုများကနေသီအိုရီနှင့်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ၎င်း၏ convergence ၌တည်၏။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတစ်ဦးကထပ်မံန့်အသတ်ညစ်ညမ်းရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်မခံခဲ့ရတာပါပဲ။ တနည်းအားဖြင့်သင်တန်းသားများကိုအမျိုးသမီးတွေ / ယောက်ျားသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်တစ်ဦးချင်းစီသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေအဖြစ်၏အဝတ်အချည်းစည်းပုံရိပ်တွေအဖြစ်ညစ်ညမ်းသတ်မှတ်နိုင်ဘူး။ အကျိုးဆက်အားသင်တန်းသားများကိုအချို့အမျိုးအစားများကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်အခြားကျော်တဦးတည်းချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှုတ်ဆက်ပြီးကြပေမည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုလောင်ခဲ့ကြသောအရာကိုအတိုင်းအတာအထိဘယ်လောက်ရှိသလဲရန်သင်တန်းသားများကိုတောင်းဆိုနေတာသင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်း၏ပျံ့နှံ့နေတဲ့အမျိုးအစားများကိုကျော်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေး။
များစွာသောလူငယ်များများအတွက်ပထမဦးဆုံး '' လိင်ပညာပေး '' အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ညစ်ညမ်းနေသော်လည်းညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုအပေါ်အပြီးအပြတ်ကောက်သုတေသနကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်ညစ်ညမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးပါဆွေးနွေးမှုများ၏အထွေထွေမရှိခြင်းလည်းမရှိ။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်အကြားသုတေသနမကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြအခြားသူတွေတစ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်အကြားကဒီလေ့လာမှုနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူအပေါ်သုတေသနပြုခြင်းထက်သိသိသာသာလျော့နည်းစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရှေ့ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်နည်းလမ်းများမှကြွလာသောအခါ, 3AM Pre-တည်ဆဲ script များ၏အရေးပါမှုကိုအထဲကမြေပုံ: ပိုမိုကိုက်ညီမှုမရှိသည့်စားသုံးသူရဲ့ Pre-ရှိပြီးသားအတွက် script ညစ်ညမ်း script ကိုမှဖြစ်ကြောင်း, ထိုလျော့နည်းသည့်ညစ်ညမ်း script ကို exposure.28 အပေါ်သို့သူတို့ရဲ့အနာဂတ် script ကို dictate ပါလိမ့်မယ် ထို့ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအသက်အရွယ်မှာခိုင်မာတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးညစ်ညမ်းမှသားသမီးရဲ့ access ကို minimize လုပ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားဖြင့်ပြည့်စုံ, အလွန်အရေးပါသည်။ အဆိုပါညစ်ညမ်း script ကိုရန်သော့ချက်က Moderator အဖြစ်မော်ဒယ်နောက်ထပ် LOCATION '' ပရိသတ်ကိုအလွန်တရာအရေးကြီးတယ် '' ။ ဒီသဘောနဲ့ 28, ထိုကဲ့သို့သောမီဒီယာစာတတ်မြောက်ရေးအဖြစ်ပညာရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများညစ်ညမ်းများ၏ပျက်ဆီး minimize လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူလူငယ်များ၏တပ်ဆင်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုညစ်ညမ်းပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူရုန်းကန်လူငယ်များဖို့သင့်လျော်သောထောက်ခံမှုပိုပြီးအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်, စွဲလမ်းတဲ့သတ္တိလည်းရှိတယ်သောအငြင်းအခုံတွေနဲ့ကိုက်ညီကတည်းက။